Mashandisiro Ekushandisa Yemagariro Media Kubatsira Bhizinesi Rako | Martech Zone
Mashandisiro Ekushandisa Yemagariro Midhiya Kubatsira Bhizinesi Rako
Muvhuro, October 6, 2014 Muvhuro, October 6, 2014 Douglas Karr
Zvichipa kuomarara kwekushambadzira midhiya enhau, maturusi, uye ongororo, izvi zvingaite senge yekutanga post. Unogona kushamisika izvo chete 55% emabhizinesi anonyatsoshandisa vezvenhau zvebhizinesi.
Zviri nyore kufunga nezvemagariro enhau seyakaipa isina kukosha kune rako bhizinesi. Neruzha rwese kunze uko, mabhizinesi mazhinji anozvidza simba rezvemagariro enhau, asi zvemagariro zvakanyanyisa kupfuura maTweets uye mapikicha ekati: Ikozvino ndipo apo vatengi vanoenda kunotsvaga zvigadzirwa uye zvemukati, vatevere uye vagoita nemhando dzavanofarira, crowdource maonero kuwana kurudziro uye kuendeswa, uye kugovana zvemukati nema network avo. Nzvimbo
Kune vashambadzi vanoshandisa vezvenhau, chakakosha 92% yevatengesi inoratidza kuti vezvenhau vakakosha yebhizinesi ravo, kubva pa86% muna 2013 - sekureva kwa Yemagariro Midhiya Muongorori Yemagariro Media Kushambadzira Indasitiri Chirevo. Pakazara, zvemagariro enhau mabhajeti anotarisirwa kupetwa kaviri mumakore mashanu anotevera!
Zvinotoshamisa kuti isu hatimanikidze vatengi vese kuti vapinde mumasocial media. Isu hatidaro nekuti isu kazhinji tinowana kuti ivo havana dzimwe nheyo dzekuvapo kwavo pamhepo munzvimbo. Ivo havana saiti yakagadziriswa iyo inofambiswa nyore nyore. Vanoshaya chirongwa cheemail chekutaurirana nguva dzose. Ivo vanoshaya kugona kutyaira kushanya mukutendeuka. Kana ivo vanoshaya kugona kwemushanyi webhusaiti kuti atsvage saiti yavo uye vawane ruzivo rwavanoda.
Zvemagariro midhiya inzira yekutaurirana, kwete imwewo svikiro kuratidza yako kushambadzira kuyedza. Pane tarisiro kubva kune vateereri kuti iwe uchave unoteerera, kutendeseka, uye unobatsira kuburikidza nesocial media. Kana iwe uchikwanisa kuita izvozvo, iwe unogona kuwedzera pasocial media toni yekutengesa, kushambadzira, mhinduro, uye kuwedzera kwako kusvika. Makambani anowanzo funga kuti kungotanga peji rekambani paFacebook inzira yemagariro - asi kune zvakawanda zvimwe zvinhu zvehurongwa hwemagariro:
Chiremera Chekuvaka - Kana iwe uchishuvira kuzivikanwa nekuremekedzwa muindasitiri yako, kuve nehukuru hwemagariro enhau kuve kwakakosha.
Kuteerera - Havasi vanhu chete vanotaura newe pasocial media, vanhu vanotaura nezvako ndizvo zvakakosha. A zvichiongororwa zano rakakosha kuti uwane hurukuro pamusoro pako iwe dzausina kunyorwa mukati pamwe nemanzwiro ese eako brand, zvigadzirwa nemasevhisi.
kutaurirana - Zvinonzwika zvakakosha, asi kuve nechokwadi kuti unoshandisa nzira idzo vanhu vari kuteerera dzakakosha. Kana iwe uine nhau dzakakosha kana nyaya dzekutsigira nezvekambani yako, ako masocial chiteshi zvirinani uve goto yekuenda kuti uite yako yeruzhinji hukama nzira.
Mabatiro evatengi - Kunyangwe iwe uchitenda ako enhau midhiya chiteshi ndeyevatengi rutsigiro hazvina basa… ivo vari! Uye inzira dzeveruzhinji saka kugona kwako kugadzirisa nyaya dzevashandi nekukurumidza uye zvinogutsa kunobatsira kushambadzira kwako.
Discounts uye Specials - Vanhu vazhinji vanozosaina kana ivo vachiziva kuti pachave nemikana yezvisarudzika zvinopihwa, mitengo, makuponi uye zvimwe zvekuchengetedza.
Humanity - Mhando, marogo uye masirogani hazvipe ruzivo rwakawanda mumoyo wechiratidzo, asi vanhu vako vanoita! Yako yemagariro midhiya kuvapo kunopa mukana kune vateveri vako kuti vaone vanhu vari kuseri kwechiratidzo. Shandisa!
Wedzera Kukosha - Yako magadziriso ehukama haagare achifanira kunge ari pamusoro pako! Muchokwadi, ivo havafanirwe kunge vachigara vari pamusoro pako. Ungawedzera sei kukosha kune ako vatengi. Pamwe pane nhau kana chinyorwa pane imwe saiti icho vatengi vako vangazofarira… igovane icho!
Iyi infographic kubva Nzvimbo inopa zano rakasimba kumabhizinesi anotarisa kutanga kuita paTwitter, Facebook, LinkedIn, Google+ uye mamwe mapuratifomu enharaunda. Iyo infographic inofamba mushandisi kuburikidza nezvimwe zvakakosha zviwanikwa tarisiro, kumisikidza ako maporofita mapeji, uye maitiro ekuvandudza ako ekutaurirana zano kuti urege kunzwika senge spammer!
Tags: gadzira mapepanhau enhaugadzira zano rezvemagariromangani facebook anovandudzamaawa mangani pasocial mediamangani magariro enhau anovandudzwamangani magadziriso epa twittersei kutimashandisiro aungaita vezvenhauplaceterevanhu vezvenhauSocial Media Marketingsocial media profile matipi
Simba reInfographic Kushambadzira… Iine Yambiro
Hausi Iwe Wega Wega Unotambura neAnalytics
Gumiguru 6, 2014 pa 7:49 AM
Zvemagariro midhiya zvinenge zvichidikanwa munyika yanhasi yepamhepo. Kana pasina chimwe chinhu chakamhanya zvakanaka chenhau yemagariro chinovaka kuvimbika uye kuvimba kune vangangove vatengi vako. Nenzvimbo dzakawanda kudaro kunze uko, vatengi vanoda kukwanisa kuvimba nekambani yavari kutenga nayo. Kana iwe uine yakasimba yemagariro midhiya mbiri nevateveri uye mhando yemhando iyo ichavaka nekukurumidza kutendeka kune kune vashanyi vako
Gumiguru 8, 2014 pa 7:45 AM
Great post. Tekinoroji yakavandudzika kusvika pakuwedzera zvekuti, vagadziri vanogona kutaurirana nevatengi vavo nenzira dziri nyore uye dzinokurumidza kana zvichienzaniswa nezvakaitika kare. Zvemagariro enhau zvinoita basa rakakura kusvika kuvanhu zvine mutsindo uye zvinodhura zvine mutsindo. Kuti uwedzere pane yako runyorwa, Yayo nguva dzose zvirinani kuve inoenderana munzvimbo dzese dzemagariro masayiti, maererano nemifananidzo, mapikicha mapikicha, makodhi emara, uye ruzivo. Izvi zvichapa vashandisi manzwiro ekuti ivo vari panzvimbo chaiyo uye zvakare zvinosiira fungidziro uye zvinogona kuita yako chiziviso chitupa. Kutenda nekugovana.
May 30, 2016 pa 9: 19 AM
Ndatenda neruzivo. Zvemagariro midhiya hazvishandisike kumakambani mazhinji uye kunyanya vamiririri mazuva ano. Makambani eB2C anovimba nekusvika kune avo vanowanzo tarisira vateereri uye nekuita nekukurumidza uye zvinobudirira. Zvishandiso zvakaita seBuffer, Hootsuite uye Socialhub.io ndeyecourse inodikanwa yeiyi. Chizvarwa chinotevera chekushambadzira nderekukurukurirana uye kushandisa matekinoroji ekushandisa izvi kubvuma izvi zvinogona kuunza kukura kwakakura.